Daawo Dhagarta haweenka: Taariikhda dagaalka ka dhexeeya qaar kamida hablaha Bollywoodka iyo halka cadaawadoodu gaadhay | Hawraar
September 20, 2014 Xiisaha/Xulashada, Xikmada Maanta No comments
Daawo Dhagarta haweenka: Taariikhda dagaalka ka dhexeeya qaar kamida hablaha Bollywoodka iyo halka cadaawadoodu gaadhay
Xidigaha Bollywoodka waxey leeyihiin oo ey ku raaxeysanayaan taageero yaal fara badan, laakiin tartanka ka dhexeeya qaar kamida gabdhaha Bollywoodka wuxuu gaaray in qaarkood cadaawad iyo naceyb isku qaadaan, inta badan dagaalka ka dhexeeya hablahaan ayaa ku dhisan maseyr iyo tartan shaqo.
1-Katrina Kaif iyo Deepika Padukone:
Qilaafka ka dhexeeya labadaan atariisho waa mid ku dhisan maseyr maadaama Katrina xariir la sameysay gacaliyihii hore ee Deepika Ranbir Kapoor, arintaan waxey keentay in holac ka dhax shidmo gabdhahaan.
Aishwarya Rai iyo Sushmita Sen:
In kastoo labadaan gabdhood ey ku guuleysteen boqorada quruxda India iyo caalamka, sidoo kalana ey guulo ka sameeyeen shaashada filimada Bollywoodka, waxaa ka dhexeeya qilaaf weyn oo ku saleysan maseyr iyo mid shaqo.
Kareena Kapoor iyo Priyanka Chopra:
Labadaan gabdhoos iskuma dagaal arin ku saabsan abaalmarin ama mashaakil kale, laakiin waxey iskula dheceen Priyanka ayaa balan la wadaagtay Shahid Kapoor oo horay saaxib ula ahaa Kareena, dhibaato wayn ayaana arintani dhalisay.
Jaya Bachchan iyo Rekha:
Asbaabta ka dambeysa dagaalka labadaan jilaa waxaa lagu shegaa inuu yahay Amitabh Bachchan oo marki hore jaceyl lasoo wadaagay Rekha
kadibna guursaday Jaya.
Rani Mukherjee iyo Aishwarya Rai:
Labadaan gabdhood waxey ku kulmeen filimka “Chalte Chalte, waxeyna soo mareen xili ey isku ahaayeen far iyo faraanti laakiin marki dambe waxey isku noqdeen gaas iyo dab.